Ny maha-zava-dehibe ny Baiboly | Fiangonan'Andriamanitra an'izao tontolo izao Soisa - Fiangonan'Andriamanitra andriamanitra Switzerland
«Ny soratra masina dia Tenin’Andriamanitra ara-tsindrimandry, ny fijoroana ho vavolombelona mahatoky momba ny Filazantsara, ary ny marina sy marina fitondra nomen’Andriamanitra ny olona. Amin'io lafiny io, ny Soratra Masina dia tsy mety ary fototra ho an'ny Fiangonana amin'ny fanontaniana rehetra momba ny fampianarana sy ny fiainana » (2 Timoty 3,15:17 - 2; 1,20 Petera 21: 17,17; Jaona).
Ny mpanoratra ny Taratasy ho an'ny hebreo dia nilaza izao manaraka izao momba ny fomba nitenenan'Andriamanitra nandritra ny taonjato maro niainan'ny olombelona: «Taorian'ny niresahan'Andriamanitra tamin'ny raim-pianakaviana imbetsaka sy tamin'ny fomba maro dia niteny tamintsika izy amin'izao andro farany izao ny zanaka " (Hebreo 1,1: 2).
Ny foto-kevitry ny "làlana marobe sy maro" .Ny teny nanoratana dia tsy nisy hatrany, ary tsindraindray dia nambaran'Andriamanitra tamin'ny heviny ireo patriarika toa an'i Abrahama, Noa, sns ... amin'ny alàlan'ireo zava-nitranga mahafinaritra. Fampisehoana tany aloha sy ny olombelona Rehefa nandeha ny fotoana dia nampiasa fomba isan-karazany Andriamanitra mba hisarihana ny sain'olombelona (toa ilay roimemy nirehitra tao amin'ny Eksodosy 2: 3,2) ary nandefa iraka toa an'i Mosesy, Joshua, Debora, sns izy hanome ny teniny amin'ny olona.
Toa tamin'ny fivoaran'ny soratra masina dia nanomboka nampiasa ity haino aman-jery ity Andriamanitra hitana ny hafany ho antsika taranany, mpaminany sy mpampianatra manaitaitra mba handrenesana izay tiany holazaina amin'ny olombelona.
Tsy toy ny ankamaroan'ny soratra masin'ny fivavahana malaza hafa, ny fanangonana boky antsoina hoe "Testamenta Taloha", izay ahitana ny soratra talohan'ny Kristy, dia milaza fa Tenin'Andrimanitra.Jeremia 1,9: 1,3.6.9; Amosa 11, 13, 1,1,; ary; Mika sy fizarana maro hafa dia manambara fa ireo mpaminany dia nahatakatra ny hafatra rakitsoratr'izy ireo toy ny hoe niteny ny tenany Andriamanitra, ary toy izany no nahatonga ny "olona tarihin'ny Fanahy Masina amin'ny anaran'Andriamanitra. niresaka " (2 Petera 1,21). I Paoly dia miantso ny Testamenta Taloha "ny soratra masina" izay "tarihin'ny fanahy masina" (2 Timoty 3,15: 16).
Ny Testamenta Vaovao
Ity hevitra momba ny fitaomam-panahy ity dia nalain'ny mpanoratra ao amin'ny Testamenta Vaovao. Ny Testamenta Vaovao dia fitambarana soratra masina izay, indrindra amin'ny alàlan'ny fiarahana amin'ireo izay nekena ho apostoly talohan'ny [andron'ny] Asa 15, dia nilaza ny fahefana ho ny Soratra Masina. Marihina fa ny apostoly Petera dia nanasokajy ny taratasin'i Paoly "araka ny fahendrena nomena azy" teo ambanin'ny "soratra hafa" (2 Petera 3,15: 16). Taorian'ny nahafatesan'ireo apostoly voalohany ireo, tsy nisy boky nosoratana izay noraisina taty aoriana fa ampahany amin'ny antsointsika ankehitriny hoe Baiboly.
Ny Apôstôly toa an'i Jaona sy i Petera, izay niara-nandeha tamin'i Kristy, dia nandrakitra ireo hevi-dehibe amin'ny asan'i Jesosy sy ny fampianarana ho antsika (1 Jaona 1,1: 4-21,24.25; Jaona). Efa "nahita ny voninahiny ho an'ny tenany" izy ireo ary "nanana ny teny faminaniana tamin'ny fomba mafy orina kokoa", ary nampahafantatra antsika ny "hery sy ny fiavian'i Jesosy Kristy Tompontsika" (2 Petera 1,16: 19). Lukas, dokotera ary olona izay noheverina ho mpahay tantara ihany koa dia nanangona tantara avy amin'ny "vavolombelona nanatri-maso sy mpanompon'ny teny" ary nanoratra "tatitra milamina" mba hahafahantsika "hianatra ny fototry ny fampianarana izay nampianarina anay" (Lioka 1,1-4).
Jesosy dia nilaza fa ny Fanahy Masina dia hampahatsiahy ny Apostoly amin'izay nolazainy (Jaona 14,26). Tahaka ny nanentanany ny mpanoratra ny Testamenta Taloha, ny Fanahy Masina dia hanome aingam-panahy ny apostoly hanoratra ny boky sy ny soratra masiny ho antsika, ary hitarika azy ireo amin'ny fahamarinana rehetra (Jaona 15,26:16,13;). Ho antsika dia soratra masina dia vavolombelona mahatoky amin'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy.
Ny soratra masina dia Tenin'Andriamanitra ara-tsindrimandry
Noho izany, ny filazan'ny Baiboly fa ny Soratra Masina dia ny Tenin'Andriamanitra ara-tsindrimandry dia firaketana marina sy marina momba ny fanambarana nataon'Andriamanitra tamin'ny zanak'olombelona. Miresaka ny fahefan'Andriamanitra izy. Hitantsika fa ny Baiboly dia mizara roa: ny Testamenta Taloha, izay, araka ny lazain'ny taratasy ho an'ny Hebreo, dia mampiseho izay nolazain'Andriamanitra tamin'ny alàlan'ny mpaminany; ary koa ny Testamenta Vaovao, izay mampiharihary indray momba ny Hebreo 1,1: 2, izay nomen'Andriamanitra antsika tamin'ny alalany (amin'ny alàlan'ny soratra masina apôstôly). Noho izany, araka ny voalazan'ny soratra masina, ireo mambran'ny fianakavian'Andriamanitra dia "miorina eo amin'ny fanorenan'ny apôstôly sy ny mpaminany miaraka amin'i Jesosy tenany ho fehizoro" (Efesiana 2,19: 20).
Inona no lanjan'ny Soratra Masina ho an'ny mpino?
Ny soratra masina dia mitondra antsika amin'ny famonjena amin'ny finoana an'i Jesosy Kristy. Ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao dia samy mamaritra ny hasin'ny soratra masina ho an'ny mino. "Fanilon'ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao", hoy ny mpanao salamo (Salamo 119,105). Fa aiza no lalana ahitany ilay teny? Noraisin'i Paoly tamin'izy nanoratra tamin'i Timoty evanjelista. Andeha hodinihintsika akaiky izay nolazainy ao amin'ny 2 Timoty 3,15 (namerina tao anatin'ny fandikan-tenin'ny Baiboly telo samihafa) dia nilaza:
"... fantaro ny soratra masina [izay] afaka mampianatra anao ho voavonjy amin'ny finoana an'i Kristy Jesosy" (Lotera 1984).
"... hainao ny soratra masina izay afaka mampahahendry anao amin'ny famonjena amin'ny alalan'ny finoana an'i Kristy Jesosy" (Fandikana Schlachter).
“Ankoatra izany, dia efa nahafantatra tsara ny Soratra Masina ianao hatramin'ny fahazazana. Mampiseho anao ny hany làlana mankany amin'ny famonjena, ny finoana an'i Jesosy Kristy " (Manantena ny rehetra).
Ity andalana lehibe ity dia manamafy fa ny Soratra Masina dia mitarika antsika mankany amin'ny famonjena amin'ny alalan'ny finoana an'i Kristy. I Jesosy mihitsy no nanazava fa ny Soratra Masina no nanambara azy. Hoy izy hoe: "Izay rehetra nosoratako dia tsy maintsy tanterahina ao amin'ny lalàn'i Mosesy sy ny mpaminany ary ny salamo (Lioka 24,44). Ireo soratra masina ireo dia nanondro an'i Kristy ho ny Mesia. Ao amin'io toko io ihany, i Lioka dia nitantara fa nihaona tamin'ny mpianatra roa i Jesosy raha mbola nandeha an-tongotra ho any amin'ny vohitra atao hoe Emmaus ", ary nanomboka niaraka tamin'i Mosesy sy ny mpaminany rehetra izy ary nanazava izay voalaza momba azy ao amin'ny Soratra Masina". (Lioka 24,27).
Tao amin'ny fizarana hafa, rehefa nenjehin'ny Jiosy izy, izay nino fa ny fitandremana ny lalàna dia lalana mankany amin'ny fiainana mandrakizay, dia nanitsy izany tamin'ny filazany fa "mijery ny soratra masina ianao satria mieritreritra fa manana azy ireo ianao. fiainana mandrakizay ao anatiny; ary izy no manambara ahy; nefa tsy te-hanatona ahy ianao fa manana fiainana " (Jaona 5,39-40).
Ny soratra masina koa no manamasina sy mameno antsika
Ny soratra masina dia mitondra antsika mankany amin'ny famonjena ao amin'i Kristy, ary amin'ny alàlan'ny asan'ny Fanahy Masina dia hamasinina isika amin'ny alàlan'ny soratra masina (Jaona 17,17). Ny fiainana araka ny fahamarinan'ny Soratra Masina manasaraka antsika.
Mbola nanazava i Paoly ao amin'ny 2 Timoty 3,16: 17:
"Fa ny Soratra Masina rehetra izay nampidirin'Andriamanitra dia mahasoa amin'ny fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanatsarana, ho fanabeazana amin'ny fahamarinana fa tonga lafatra ny lehilahin'Andriamanitra, amin'ny asa tsara rehetra."
Ny Soratra Masina, izay manondro antsika an'i Kristy ho famonjena, dia mampianatra antsika momba ny fampianaran'i Kristy koa, mba hahazoantsika mitovitovy. 2. Nanambara i Jaona 9 fa "izay mihoatra lavitra ka tsy mitoetra ao amin'ny fampianaran'i Kristy dia tsy manana Andriamanitra", ary nanizingizina i Paoly fa manaiky ny "teny mahasitrana" nataon'i Jesosy Kristy isika (1 Timoty 6,3). Jesosy dia nanamafy fa ny mpino izay mankato ny teniny dia tahaka ny olon-kendry izay manorina ny tranony eo ambony vatolampy (Matio 7,24).
Noho izany, ny Soratra Masina dia tsy mahatonga antsika ho hendry indrindra amin'ny famonjena, fa mitarika ny mpino ho amin'ny fahamatorana ara-panahy ary mameno azy ho amin'ny asan'ny filazantsara. Ny Baiboly dia tsy manao fampanantenana poakaty amin'izany rehetra izany. Ny Soratra Masina dia tsy mety ary ny fototry ny Fiangonana amin'ny resaka fotopampianarana sy fiainana masina.
Fianarana Baiboly - fifehezana kristiana
Ny fandalinana ny Baiboly dia fifehezana kristiana ifotony izay hita tsara ao amin'ny fitantaran'ny Testamenta Vaovao. Ireo Beriana marina dia "nanaiky an-tsitrapo ny teny ary nikaroka ny Soratra Masina isan'andro hahitana raha marina izany" hanamafisana ny finoany an'i Kristy (Asan’ny Apostoly 17,11). Ny mpitahiry vola ao amin'ny Mpanjakavavy Kandake avy any Etiopia dia namaky an'i Isaia rehefa nitory an'i Jesosy taminy i Filipo (Asan’ny Apostoly 8,26: 39). Timoty, izay nahalala ny Soratra Masina hatramin'ny fahazazany hatramin'ny finoana ny reniny sy ny renibeny (2 Timoty 1,5: 3,15;) dia nampahatsiahivin'i Paoly ny fizarana marina ny teny fahamarinana (2 Timoty 2,15), ary "mitory ny teny" (2 Timoty 4,2).
Ny taratasy ho an'i Titosy dia manome toromarika fa ny anti-panahy rehetra dia "mankatò ny tenin'ny fahamarinana izay azo antoka" (Titosy 1,9). Nampahatsiahy ny Romanina i Paoly fa "manana fanantenana amin'ny alalan'ny faharetana sy ny fampiononana ny Soratra Masina isika" (Romana 15,4).
Mampitandrina antsika koa ny Baiboly mba tsy hiantehitra amin'ny fandikan-tenantsika manokana momba ny fizarana ara-Baiboly (2 Petera 1,20) hamadika ny soratra masina amin'ny fanamelohana antsika manokana (2 Petera 3,16), ary miady amin'ny adihevitra sy miady amin'ny hevitry ny teny sy ny lisitry ny fitenin'ny lahy sy ny vavy (Titosy 3,9; 2 Timoty 2,14.23,). Ny Tenin'Andriamanitra dia tsy fehezin'ny fahalalantsika sy ny fanodikodinantsika mialoha (2 Timoty 2,9), kosa dia "velona sy matanjaka" ary "mpitsara ny eritreritra sy ny fahatsapan'ny fo" (Hebreo 4,12).
Mifanaraka amin'ny kristiana ny Baiboly satria. , ,
Izy io dia Tenin'Andriamanitra ara-tsindrimandry.
dia mitarika ny mpino mankany amin'ny famonjena amin'ny alalan'ny finoana an'i Kristy izany.
Izy no manamasina ny mpino amin'ny alàlan'ny asan'ny Fanahy Masina.
dia mitarika ny mpino ho amin'ny fahamatorana ara-panahy.
mameno ny mpino amin'ny asan'ny filazantsara izany.